DAAWO SAWIRO:- Duqeeyn ka dhacday magaalada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaDAAWO SAWIRO:- Duqeeyn ka dhacday magaalada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose
Hiiraan Xog, Waxaa habeen hore weerar isugu jiray cir iyo dhul deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose ku qaaday ciidamo katirsan Kumaandooska Soomaaliya iyo ciidamo kale oo Mareykanka ah.
Ciidamada Huwanta ah ayaa la sheegay in diyaarado uga daateen duleedka deegaanka Janaale, waxaana isla xiligaas iska caabin kala kulmeen dagaalyahano katirsan Al Shabaab oo heegan ku jiray kuna sugnaa banaanka Janaale.
Al Shabaab ayaana sheegtay in ay iska caabiyeen weerarkii ay kusoo qaadeen Ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka, waxa ayna Shabaab sheegeen in howlgalkaasi fashilieen.
Dhinaca kale Diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo taageerayay ciidamada lugta ku galay Janaale ayaa la sheegay in gantaalo ku garaaceen xaafado kuyaala deegaanka Janaale, lamana soo sheegin khasaaro nafeed oo ka dhashay duqentaasi.
Sawirro laga soo qaaday aaga madaafiicda ku dhacdday ayaa muujinaya bur bur xoogan oo ka dhashay duqeyntaasi oo habeen hore lagu garaacay deegaanka Janaale ay maamulaan Dagaalyahanada Al Shabaab.